Home News Baydhabo oo ay suuragal tahay in ay ka dhacdo doorasho aan la...
Baydhabo oo ay suuragal tahay in ay ka dhacdo doorasho aan la isku-raacsaneeyn iyo Musharaxiinta oo!!
Guddiga doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shaaciyay in Maanta oo ay taariikhdu tahay 16-ka bishaan ay bilaaban doonoto Khudbad jeedinta Musharaxiinta u taagan qabashada xilka Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Musharaxiinta u tartamaya xilka Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa la filayaa in ay hortagaan Xildhibaanada Baarlamaanka maamulkaasi,isla markaana ay horjeediyaan Khudbado ay kaga hadlayaan waxqabadkood ku aadan markii xilka ay qabtaan.
Khudbad jeedinta Musharaxiinta ayaa waxa ay ku egtahay sida uu shaaciyay Guddiga Doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya maalinta Bbiri oo taariikhdu tahay 17-da Desember 2018.
Dhinaca kale Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo shalay warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu Guddiga Doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed ka dalbaday in dib loo dhigo Doorashada,Maadaama uu xiran yahay mid kamid ah Musharaxiinta Koonfur Galbeed.
Sheekh Rooboow Cali Abuu Mansuur oo kamid ah Musharaxiinta Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa labo maalin kahor Ciidamada Itoobiya ay ka soo xireen Magaalada Baydhabo,isla markaana la keenay Magaalada Muqdisho.
Previous articleXildhibaano Itoobiya u diray Warqad Cabasho ah iyo wararkii ugu dambeeyay!!
Next articleMareeykanka oo sheegay in uu dilay 8-dagaalame oo shabaab ah
Al-Shabaab oo Weerar ku qaaday Saldhig Boolis oo kuyaala Gudaha Dalka...
Md. Mahad Cawad: Mowshinku Wuxuu Xiriir La Leeyahay Go’aankii DP World